Casharka 71aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCW
Dagaalkan oo ahaa dagaal weyn wuxuu dhacay bishii Jamaadul-Awa, sannadkii 8aad ee hijriga. Mu'ta oo uu dagaalku ka dhacay waxa ay ahayd magaalo Shaam ku taal. Sababta dagaalkani waxa ay ahayd sidan: Rasuulka SCW ayaa warqad u diray boqorkii Basra, uguna sii dhiibay Xaarith binu Cumeyr. Waxaa Xaarith dilay nin la oran jirey Shuraxbiil binu Camar oo boqortooyadii Qaysar madax uga ahaa meesha la yiraahdo Balqaa oo Shaam ka tirsan, waxaana waqtigaas iyo maantaba aad u fool xun in la dilo wufuudda iyo musaafiriinta. Rasuulku SCW markii uu warkaa maqlay aad ayuu uga xumaaday, wuxuuna diray ciidan xoog leh oo gaarayey 3,000 oo nin, wuxuuna madax uga dhigay Seyd binu Xaarith, wuxuuna Rasuulku SCW yiri "haddii Seyd la dilo, Jacfar binu Abii-Dhaalib madax ha noqdo; haddii Jacfar la dilana Cabdullaahi ibnu Rawaaxa madax ha noqdo". Rasuulku SCW wuxuu ciidankaa siiyey calan cad oo uu u dhiibay Seyd, wuxuuna u dardaarmay in ay keenaan ninki dilay Xaarith binu Cumeyr, marka horese ay dadkaas islaamka ugu yeeraan o ohaddii ay diidaan ay iyaga oo Ilaahay u kaalmaysanaya la dagaallamaan. Rasuulku SCW waxaa kale oo uu ciidankaa ku yiri "ugu duula magaca Alle, jidka Alle, cid Alle ku kufriday, ha doorinina hana dilina carruur, haween iyo duqo, ha goynina dhirta hana duminnina dhista".
Ka dib wuxuu ciidankaasi isu diyaariyey ambabax, dadkii reer Madiinana waxa ay isugu yimaadeen goobtii uu ciidanku ka baxayey iyaga oo u duceynaya ciidanka oo ku leh "Allaha idin nabad yeelo, hana idin difaaco, soona noqda idinka oo soo qaniimaystay", markaas ayuu Cabdullaahi binu Rawaaxa tiriyey gabay. Ka dib ciidankii way baxeen, waxaana sii sagootiyey Rasuulku SCW ilaa ay ka gaareen meesha la yiraahdo Thaniyatul-Wadaac.
Markii uu ciidankii marayo meesha la yiraahdo Macaan oo Shaam ka tirsan ayey maqleen in boqorkii Ruum ee hiragle uu Bulqaa ku soo siyaadiyey boqol kun oo ciidan roomaana ah iyo boqol kun oo kale oo ah carabtii kiristaanka. Ciidankii muslimiintu waxa ay degeen meesha layiraahdo Macaan oo ay laba habeen joogeen iyaga oo ka tashanaya sidii ay yeeli lahaayeen oo ay uga hor tegi lahaayeen ciidankaas aadka u tirada badan. Wax ay wada tashadaanba waxaa go'aan lagu gaaray in Rasuulkii SCW waraaq loo qoro oo loo sheego tirada cadowga, ka dib Rasuulku SCW ama ciidan ha soo siyaadiyo ama amar kale ha soo siiyo, hase yeeshee waxaa ra'yigan ka hor yimid Cabdullaahi binu Rawaaxa oo ciidankii geesinomo geliyey, wuxuuna yiri "dadyohow Ilaah baan ku dhaartaye waxa aad ka hanaysaan waa shahaadadii aad u soo baxdeen ee aad doonayseen. Dadka kulama dagaallanno tiro badnaan iyo awood, kulana dagaallami mayno illaa diinkan Allaah nagu karaameeyyey ma ahane, hana la baxo labadii wanaagsanayd midkood ayaan leenahay (guul ama shahaado). Ugu dambeyntii waxaa la qaatay ra'yigii Cabdullaahi oo ciidankii muslimiintu cadowgii ayey u sii dhowaadeen ilaa ay ka gaareen meel ka tirsan Bulqaa oo la yiraahdo Mashaarif, ayna joogeen ciidankii Hiraqle. Ka dib ciidanku waxa ay degeen Mu'ta, wuxuuna isu diyaariyey dagaal. Ciidanka qaybtiisa midig waxaa madax looga dhigay Qudhba binu Qataada, qaybta bidixna Cubaada binu Maalik.
Labadii ciidan waxay ku kulmeen Mu'ta iyada oo ay ciidanka muslimiinta tiradoodu ahayd 3,000, kuwa gaaladana 200,000. Arrinkan oo ah arrin ay cibro ku sugantahay, labo ciidan oo cadadkoodu intaa isku jiro, oo waliba kan cadadka yari duulaan yahay, meel fogna kasoo duulay. Mana ahan arrintaan oo kaliya ee waxaan mar walba ku arkaynaa siirada Rasuulka SCW in ay aad u kala badan yihiin cidanka muslimiinta iyo kan gaaladu. Haddaba waxaa la doonayaa inuu qof walba oo muslim ihi ka faa'iidaysto, kuna daydo akhyaartaas naftoodii u hurtay Alle dartiis, Rabbigiisna ku kalsoonaado kalsooni dhab ah, uusanna u arkin in cid kale wax ka qaadi karto mar haddii uu isagu Alle ku xiran yahay. Waxaana maanta jirta in dadkii musliminta ahaa markii ay Ilaahay diintiisii ka tageen Ilaahay ku riday rucbi oo ay gaaladii shan mayl ka cararayaan, arrintaas oo ay sababtay adduunyo jacayl iyo dhimasho ka carar, siduu Rasuulkuba SCW tilmaamay, waxaana xaqiiqo ah in ciddii iiman uu ka buuxo aysan waxba la ahayn xitaa haddii ay la dagallamaan dunida oo idil maxaa yeelay waxa ay u dagaallamayaan oo ay ku xiran yihiin Allihii addunka oo dhan abuuray isla markaasna maamulaya, ciddii uu la jiraan wax ka guulaysan karaa aysan jirin.
Hoggaamiyaha ciidanka muslimiinta, Seyd binu Xaarith, oo ahaa mawlihii Rasuulka SCW, Rasuulkuna aad u jeclaa, taariikhdii islaamka iyo jihaadkiina qayb libaax ka soo qaatay, wuxuu muujiyey geesinnimadii iyo dagaalyahannimadii lagu yaqaannay ilaa uu aakhirkii ka shahiiday. Ka dib waxaa calankii qaaday ciidankiina hoggaanka u qabtay sidii uu Rasulku SCW amrayba Jacfar binu Abii-Dhaalib. Jacfar wuxuu isaguna dagaallamay dagaal xeel dheer, markii ay arrintii aad u kululaatay ayuu Jacfar intuu faraskiisii boqno gooyey dagaalkii sii waday ilaa gacantisii midig la gooyey, wuxuu calankii ku qabsaday gacantii bidix ilaa iyadiina la gooyey, markaas ayuu garbihiisii isugu soo dumay (isugu keenay) ilaa uu ka shahiiday. Rasuulku SCW wuxuu sheegay in uu Ilaahay siiyey Jacfar labo garab oo jannada meeshii uu ka rabo ugu duulo, waxaana Jacfar la dhahaa labo Garable. Cabdullaahi ibnu Cumar wuxuu yiri "meydkii Jacfar baan dul istaagay, waxa aan ka tiriyey 50 nabar oo isug jirey seef iyo waran, haddii lagu daro fallaarahana waxa ay gaarayeen dhowr iyo sagaashan". Ka dib sidiii amarka Nabiga SCW ahaa waxaa ciidankii hoggaanka u qabtay Cabdullaahi ibnu Rawaaxa. Cabdullaahi sidi saaxiibbadiis o kale ayuu ciidankii ugu hor maray isaga oo faraskiisii saaran. Naftiisii ayuu xoogaa ka dareemay markaasuu u tiriyey tix yar oo ku leeyahay "Waxa aan nafyahay ku dhaaranayaa in aad u degto (dagaalka) ee yeel ama nac. Maxaan kuu arkaa (nafyahay) in aad jannada naceysid". Ka dib Cabdullaahi wuu dagaallamay ilaa uu ka shahiiday.
Markii ay shahiideen saddexdii nin ee Rasuulku SCW soo magacaabay, dagaalkiina uu weli si daran u socdo ayaa calankii waxaa qaaday Thaabit binu Arqam oo yiri "muslimiineey nin iska soo dhex doorta", markaas ayey dheheen "adiga ayaan ku dooranay", wuxuu yiri "aniga ma qabanayo (hoggaanka)", ka dib waxaa la doortay Khaalid binu Waliid. Khaalid waxa uu dagaalamay dagaal aad u xeel dheer ilaa Sagaal seefood gacantiisa ku jabeen. Khaalid oo aad u yaqaannay xeeladaha dagaalka waxa uu adeegsaday aqoontiisi ciidammeed, wuxuuna beddelay qaabki uu ciidanka muslimiintu u dagaal gelayey oo ciidankii midig joogey bidix ayuu geeyey, kii bidix joogeyna midgi, kuwii gadaal joogeyna hore. Roomaanki waxa ay u maleeyeen in ciidan xoojin ah uu ku soo biiray ciidankii muslimiinta, markaas ayaa Ilaahay ku riday baqo iyo niyad jab oo gadaal bay u gurteen. Khaalid markii uu muddo dagaalkii waday kagana gacan sarreeyey ayuu si tartiib tartiib ah u soo bixiyey ciidankii muslimiinta. Roomaankii oo baqdini gashay ayaa ku laabtay magaaladoodii. Khaalid iyo ciidankiisii waxa ay soo aadeen Madiina.
Rasuulka SCW oo loo waxyooday intii aysan ciidanku Madiina gaarin ayaa asxaabtii ku yiri "waxaa calankii qaaday Seyd waana la diley, ka dib waxaa qaaday Jacfar isna waa la diley, ka dibna waxaa qaaday ibnu Rawaaxa isna waa la diley ilaa uu ka qabtay calankii seef seefaha Alle ka mid ah (Khaalid) ilaa uu Ilaahay u furay".
Sidoo kale Rasuulku SCW isaga oo ka waramaya raggaas shuhadada ahaa ee ku dhintay dagaalkaas waxa uu yiri "ma ay farax galinayso (iyaga) ama ima ay farax galinayso (aniga) in ay nala joogaan.
Dagaalkan Mu'ta waxaa muslimiinta ka shahiiday 12 nin, roomaankiise lama garanayo tirada ka dhimatay laakiin waxaa la qiyaasayaa in tiro badan ay ka dhimatay. In kasta oo aysan muslimiintu dagaalkan gaaladii ku jebin, dhulna ka qabsan haddana wuxuu muslimiinta u soo hooyey guul aad u ballaaran waxa uuna ka mid ahaa dhacdooyinkii Ilaahay diintiisa ku ciseeyey. Guulahaas waxaa ka mid ahaa in carab oo dhan uu ku dhacay wareer iyo baqdin, waxa ayna ka quusteen in ay muslimiinta la dagaallamaan maxaa yeelay muslimiintu waxa ay u beer dhigeen ciidankii roomaanka oo waqtigaa dunida ugu xoogga badnaa, cid isku taagtana aysan jirin. Waxaa kale oo yaab noqotay in 3,00 oo nin ku duushay, una babac dhigtay ciidan 200,000 ah isla markaasna ay soo noqdeen iyaga oo uusan khasaare weyni soo gaarin. Waxaa kale oo ay dad badani xaqiiqsadeen in ay muslimiintu yihiin dad xagga Rabbi looga gargaarayo oo aan la hoojineyn, cid ay ka baqayaanna aysan jirin, Nabiguna SCW uu yahay Rasuul xaq ah oo Ilaahay soo diray sidaa darteed carabtii islaamka diideysey waxa ay bilaabeen in ay islaamka soo galaan oo Allaah iyo Rasuulka SCW isu dhiibaan. Waxaa si degdeg ah u soo islaamay qabaa'ilkii banuu Suleym, Ashjac, Qadafaan, Dubayaan, Fasaara iyo kuwa kale. Sidoo kale wuxuu dagaalkani albaabbada u furay duullaamadii ay muslimiintu ku qaadayeen dhulalkii fogaa iyo qabsashadii magaalooyinki Ruum.